Mahad Salaad “Heshiis kasta oo la gaaro dhanka Farmaajo kama fuli doono…” | Jowhar Somali news Leader
Home News Mahad Salaad “Heshiis kasta oo la gaaro dhanka Farmaajo kama fuli doono…”
Xildhibaan Mahad Maxamed Salaad ayaa sheegay in heshiis kasta oo ay gaaraan Madaxweyne Farmaajo iyo Madaxda dowlad Goboleedyada ee Muqdisho shirka uga socda in aanu dhanka Madaxweyne Farmaajo ka fuli doonin.
Mahad Salaad ayaa kula taliyay Madaxda dowlad Goboleedyada in qodobada heshiiska in lagu daro muddo cayiman oo doorashada ku bilaabaneyso kuna dhamaaneyso.
“Heshiis kastoo Farmaajo iyo Madaxda DG Xamar ku shirsan maanta gaaraan dhanka Farmaajo kama fuli doono. Sababtoo ah Farmaajo ilaa hada ma qaadan go’aan uu doorasho ku aadayo!
Sidaas daraadeed, waxaan kula talinayaa Madaxda DG in qodobada heshiiska lagu daro muddo cayiman oo doorashadu ku bilaabanayso kuna dhamaanayso si looga badbaado iska-daba-wareegga Farmaajo u qorsheysan”ayuu yiri Xildhibaan Mahad Salaad.
Shirka uga socda Muqdisho Madaxweyne Farmaajo iyo Madaxda dowlad goboleedyada ayaa la filayaa in looga gaaro heshiis siyaasadeed oo ku saabsan hannaanka doorashada dalka ka dhaceyso.
Hase yeeshee waxaa jirta hubaal la’aan ku aadan sida heshiiskaas dhanka Madaxweynaha uga fuli karo, iyadoo aanu dalka Ra’iisul Wasaare laheyn muddo 50 cisho ka badan, Madaxweyne Farmaajo sababta uga caga jiidayo ay tahay in aanu Ra’iisul Wasaarahaas la yeelan go’aanka doorashada.